आज बडादशैँको आठौँ दिन ,महाअष्टमी पर्व, – दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै…! – Wow Sansar
मुख्य पृष्ठ /News/आज बडादशैँको आठौँ दिन ,महाअष्टमी पर्व, – दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी मनाइँदै…!
काठमाडौआश्विन शुक्ल अष्टमीका दिनमा मनाइने महाअष्टमी पर्व आज नेपालीहरुले बडादशैँका रुपमा दुर्गा भवानीको पूजा आराधना गरी भव्यरुपमा मनाउँदैछन्। बडादशैँको आठौँ दिन आज महाकाली, महालक्ष्मी र महासरस्वतीको विशेष पूजाआजा गरिन्छ।
महाअष्टमीको दिन दुर्गा भवानीलाई शक्तिशाली बनाउने दिन भएकाले यसको विशेष महत्व रहेको छ। आजको दिन शास्त्रसम्मतरुपमा दशैँघर, कोतलगायत राज्यका विभिन्न शक्तिपीठमा पशु बलि दीइ दुर्गा भवानीको विशेष पूजाआजा गरिन्छ।
दुर्गा सप्तशती, श्रीमद्देवीभागवत र देवी स्तोत्र पाठ गरिन्छ। विवेकशील र अविवेकशील प्राणी दुवैले मोक्ष प्राप्तिको चाहना गर्ने हुनाले देवमन्दिर र यज्ञयज्ञादिमा विधिपूर्वक बलि दिनाले ती पशुले मोक्ष प्राप्त गरी माथिल्लो योनीमा जन्म लिने कुरा शास्त्रमा वर्णन गरिएको धर्मशास्त्रविद् एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्ष प्रा डा रामचन्द्र गौतमले राससलाई बताए।
“राज्य सञ्चालकले त प्रभु शक्ति, मन्त्र शक्ति र उत्साह शक्तिका लागि पशुबलि विधिपूर्वक दिनैपर्छ भन्ने शास्त्रीय वचन छ”, उनले भने। यी तीनवटा शक्ति दुर्गा भवानीबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसैकारण आजको दिन विधिपूर्वक पशुबलि दीने गरिएको हो। आजैका दिन राति कालरात्रिका रुपमा पशुबलिको विधि र पूजाआजासहित मनाउने गरिन्छ
अमेरिकी ग्रीनकार्ड रद्द गर्ने निर्णयमा ट्रंपले गरे हस्ताक्षर, डिभी पनि स्थगित
सुशान्तकी प्रेमिकालाई कडा झड्का, प्रहरीले गर्यो रिहा विरुद्ध आ-त्मह-त्या दुरुत्साहनको मुद्दा दायर